एक माइक्रोवेव मोशन सेन्सर इलेक्ट्रो-चुम्बकीय विकिरण को उपयोग गर्दछ। यो तरंगहरु लाई उत्सर्जित गर्दछ जुन त्यसपछि रिसीभर मा प्रतिबिम्बित हुन्छ। रिसीभर लहरहरु कि फिर्ता बाउन्स छन् विश्लेषण गर्दछ। यदि त्यहाँ कोठा मा एक वस्तु चलिरहेको छ, यी लहरहरु परिवर्तन गर्न जाँदैछन्। जब उत्सर्जित तरंगहरु कुनै वस्तु लाई छुन्छन्, ती फिर्ता प्रतिबिम्बित हुन्छन्, बत्ती आफै बाट उज्यालो को कारण। र हाम्रो कम्पनी हेन्ग जियान माइक्रोवेव सेन्सर संग बाढी प्रकाश को लागी, Luminaires पानी को बिरुद्ध सुरक्षित हुनेछ र अब IP65 उच्च सुरक्षा ग्रेड प्राप्त गर्दछ।
अप्टिकल मापदण्डहरु, विद्युत मापदण्डहरु र संरचनात्मक मापदण्डहरु को विशिष्टता:
डाई कास्टिंग एल्युमिनियम र टेम्पर्ड गिलास
1.Integral माइक्रोवेव सेन्सर सबै उमेर को व्यक्तिहरु को लागी सजिलो समायोजन को लागी रिमोट कंट्रोल संग पूरा।
२ माइक्रोवेव सेन्सर संग एक स्लिमलाइन एलईडी फ्लडलाइट कि रिमोट कन्ट्रोल को माध्यम बाट प्रोग्राम योग्य छ र mm सम्म को एक पत्ता लगाउने दायरा छ। आपूर्ति रिमोट प्रयोगकर्ता संवेदनशीलता, रोशनी अवधि र विभिन्न प्रकाश मोडहरु बाट छनौट को लागी आफ्नो आफ्नै आवश्यक सेटिंग्स निर्दिष्ट गर्न को लागी अनुमति दिन्छ।
3. यो अक्सर भूमिगत पार्किंग स्थल, ग्यारेज प्रकाश, कारखाना प्रकाश, स्कूल प्रकाश, शपिंग मल्ल प्रकाश, होटल, बैंक प्रकाश र प्रकाश को आवश्यकता छ कि अन्य ठाउँहरु मा प्रयोग गरीन्छ। कुनै स्विच, म्यानुअल खुला, अधिक सुविधाजनक र छिटो खोज्न को लागी आवश्यक छैन।
4. हामी उत्पादन लाइन मा सबै चरणहरुमा परीक्षण मिसिनहरु सुनिश्चित गर्न को लागी कि उत्पादनहरु शुरू देखि अन्त सम्म त्रुटि मुक्त छन्। समाप्त उत्पादनहरु को प्याकेजि In्ग मा, उत्पादनहरु को सफाई प्रत्येक उत्पादन ढुवानी भन्दा पहिले सफा छ भनेर सुनिश्चित गर्न को लागी जाँच गरिनेछ।
अघिल्लो: उच्च गुणस्तर उच्च शक्ति एलईडी उच्च बे प्रकाश
अर्को: एस श्रृंखला आंतरिक सुरक्षित एलईडी बाढी रोशनी
50w एलईडी फ्लडलाइट
फ्लड लाइट बल्ब
एलईडी फ्लड लाइट बल्ब
बाहिरी एलईडी बाढी प्रकाश
आरजीबी बाढी प्रकाश
सौर्य उर्जा बाढी बत्तीहरु